Refund mutemo - Dhizaini Dhizaina
Tinogamuchira kudzoka uye kuchinjana.
Kuti uve unokodzera kudzoka, chinhu chako chinofanira kusashandiswa uye mune imwechete mamiriro awakachigamuchira. Inofanira zvakare kunge iri mupakeji yekutanga.
Kamwe kudzoka kwako kuchinge kwagamuchirwa nekuongororwa, isu tinokutumira iwe email yekukuzivisa iwe kuti tagamuchira chinhu chako chakadzorerwa. Isu tinokuzivisa iwe mvumo kana kurambwa kwekudzoserwa kwako.
Kana iwe uchibvumidzwa, ipapo yako yekudzoreredza ichagadziriswa nenzira imwecheteyo yaakabhadharwa.
Mutengi anozove nebasa rekubhadhara mari yekutumira yekudzorera chinhu. Mari yekutumira haina kudzoserwa. Kana iwe ukatambira kudzoreredzwa, mutengo wekutakura uchabviswa kubva kune yako kudzoserwa.
Kudzoreredzwa kana kunonoka kudzoreredzwa (kana zvichibvira) Iko kunowanzo kuve nenguva yekugadzirisa kusati kwatumirwa kudzorerwa tinongogona kukudzosera iwe mushure mekunge tagamuchira chinhu chakadzorerwa
Kune mamwe mamiriro ezvinhu apo kungowanikwa zvishoma chete kunopiwa (kana zvichibvira)
Chero chinhu chisiri mumamiriro ake epakutanga, chakavhiringidzika kana kuti chinoshaya chikamu nokuda kwezvikonzero kwete nekuda kwekanganiso yedu.
Kana iwe waita zvese izvi uye usati wagamuchira yako yekudzoserwa parizvino, ndapota taura nesu ku info@dznrspot.com
Isu tinochinjana zvinhu kana iwe uchida saizi shanduko zvakare kana isina kukwana kana kukuvara. Kana iwe uchida kuchinjana chero chinhu email pa: info@dznrspot.com.